Ny ambaratonga dimy sarotra indrindra amin'ny Super Mario Run | Vaovao IPhone
Alvaro Fuentes | | Lalao IPhone, maro
Super Mario Run dia teny an-tsena nandritra ny fotoana fohy, ary efa manangona tsikera marobe, na ho an'ny mpanohitra. Misy ny mihevitra fa tsy mendrika ny vidiny ilay lalao ary miharatsy hatrany hatrany ny Nintendo. Na dia takatra aza ny ahiahy sasany dia mpankafy Mario sy Nintendo aho. Izaho dia nilalao ny lalao isan'andro hatramin'ny nivoahany, ary naverimberiko imbetsaka aza ny ambaratonga maro. Tsy afaka milaza aho fa sarotra ny Super Mario Run amin'ny ankapobeny, saingy milaza kosa aho fa ny ambaratonga sasany dia mety hiteraka fahasosoran'ny mpampiasa lehibe.
Rehefa avy nandinika izany sy nifampiresaka tamin'ny namana sasany izay nividy ny lalao isika, andao jerena ireo ambaratonga dimy sarotra indrindra amin'ny Super Mario Run. Subtitle tanteraka io hevitra io, koa aza misalasala mamaky ary tsy mitovy amin'ny zavatra soratako.
1 5. Haavo 6–4: Fihazakazahana mihazakazaka Bob-ombing an'ny mpiambina
2 4. Haavo 5–1: Valifaty nataon'i Lakitu
3 3. Haavo 5–3: Boohind Lock and Key
4 2. Haavo 2–2: Fisondrotana sy fisondrotana avo lenta
5 1. Haavo 6–3: Atsipy eny ambonin'ny sambo rehetra
5. Haavo 6–4: Fihazakazahana mihazakazaka Bob-ombing an'ny mpiambina
Eny, ity no ambaratonga farany ahafahanao mandresy an'i Bowser indray mandeha ary ho an'ny rehetra ... mandra-pamoahany lalao vaovao vaovao an'i Mario, mazava ho azy. Ny mahatonga ity haavo ity ho henjana dia tsy ny filalaovana lalao, ny zava-misy rehefa nanomboka aho dia tsy nanana izay tokony hataoko ary maharitra izany fiheverana izany. Nipetraka vetivety fotsiny aho dia nanalavitra ireo sakana nataon'i Bowser ary nanandrana nihazakazaka hatramin'ny farany alohan'ny famaranana ny famantaranandro. Mieritreritra aho fa tsara be raha toa ka nahatratra an'i Bowser ilay mpampiasa, nisambotra azy ary nanolotra famaranana hafa… fa tsia. Fa kosa, tsy maintsy averinao ny bob-ombs izay natsipin'i Bowser tamin'i Mario. Hamarino tsara fa mijanona amin'ny sehatra mitovy amin'ny Bowser ianao mba hahafahanao vonona hanafika. Raha vantany vao azonao intelo ... rehetra. Tsy dia sarotra loatra io haavo io rahateo, fa ny fahatongavana tany no tena olana.
4. Haavo 5–1: Valifaty nataon'i Lakitu
Tena mahasosotra tokoa i Lakitu. Angamba izaho irery io, fa na dia tamin'ny andron'ny Super Mario Bros aza dia nisy foana ny olana tamin'ny fanipazan'i Lakitu zavaboary bitika kely toy ny tsy misy. Ho fanampin'izay, ity haavo ity koa dia manana sehatra mandroso maro izay tokony hampiasainao. Raha ny mahazatra dia ho mora izany, fa amin'ny hazakazaka Mario amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka, dia sarotra kokoa noho ny feo.
Soa ihany, ny haavo 5-1 dia manolotra fotoana be dia be ho an'ny angovo kintana, izay mahatonga anao tsy ho resy vetivety raha tsy mianjera amin'ilay sarintany ianao. Raha tsy misy izany dia mametraka fanamby lehibe kokoa i Lakitu.
3. Haavo 5–3: Boohind Lock and Key
Boo dia miseho amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny Super Mario Run, fa ny 5-3 kosa henjana noho ny ambiny. Tsy vitan'ny hoe mandositra amin'ny varavarana misitery ianao fa mila mitady lakile hiditra amin'izany. Ireo dia mety ho hitan'ny maso tsotra na miafina, na dia ao anatin'ny Boo tenany aza. Ary koa, raha mbola eo amin'ny lalana mifanohitra amin'izany ianao dia hanomboka hanenjika anao i Boo, izay mahatonga ity haavo ity ho somary sarotra kokoa.
Tsy hetsika firy amin'ny 5-3. Fa kosa, ny fanamby dia avy amin'ny fiezahana hahazo ny lakile rehetra ary hamonjy ny varavarana rehetra ara-potoana. Ny 6-2, izay ahatongavan'i Boo hiseho farany dia ho eo amin'ny lisitra 10 voalohany, saingy ny 5-3 kosa dia nahasosotra fotsiny.
2. Haavo 2–2: Fisondrotana sy fisondrotana avo lenta
Azonao atao ny manantena fa ny ambaratonga faran'izay mafy indrindra amin'ity lisitra ity dia ho eo amin'ny tontolo dimy sy enina, toy ny nitranga tamiko fony aho nilalao voalohany. Na izany aza, iray amin'ireo ambaratonga ireo ihany no vidiko mihoatra ny 2-2. Ny ankamaroan'ny zava-mitranga ao amin'ny 2-2 dia misy ny fitsambikinana amin'ny sehatra mihetsika sy miakatra haingana, mitaky an'i Mario hitsambikina amin'ny sehatra hafa. Tsy azoko lazaina raha izaho no ratsy amin'ity asa ity na ny fizika ny lalao no omena tsiny, saingy tsy maintsy nidina an'io haavo io toy ny in-10 aho. Ny fahazoana midina tsara amin'ireto sehatra ireto dia sarotra. Nisy namako iray koa nitaraina momba an'io ambaratonga io. Manantena aho fa nomena bebe kokoa ianao.
1. Haavo 6–3: Atsipy eny ambonin'ny sambo rehetra
Tonga tamin'ny ambaratonga sarotra indrindra tamin'ny Super Mario Run ihany izahay tamin'ny farany. World 6-3 izao, mitondra ny lohateny hoe "Atsipazo eny ambonin'ny sambo rehetra". Mbola tsy afaka mivoaka eto aho raha tsy mampiasa ny boloko rehetra farafaharatsiny indray mandeha na indroa. Manipy potipoti-javatra foana ireo fahavalo ary mitsambikina mandrakariva, ka mahatonga azy ireo ho sarotra ny handalo. Eto indray dia misy sehatra kely maro hitsambikinana sy fiaingana. Mba hanaratsiana ratra dia manana baddie mahatsiravina izy hiady amin'ny farany. Tsy dia sarotra loatra io ampahany io, fa manampy faniratsirana ny ratra amin'ity ambaratonga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny ambaratonga dimy sarotra indrindra amin'ny Super Mario Run
FJLopesino dia hoy izy:
Ny 2-2 dia toa tsy manahirana ahy manokana, angamba ny zavatra atolotra amin'ity tontolo ity dia ny milalao amin'i Luigi.
Raha tsy nahatratra ny tontolon'ny 2 farany aho dia hitako fa sarotra be ny tontolo 4-1 amin'ny haavon'ny vola madinika maitso. Tena sarotra izany.
Mamaly an'i FJLopeino
Qardio dia manolotra ny QardioCore, tarika hanara-maso ny fontsika mifanaraka amin'ny iOS